Ny tombotsoan'ny "numérisation" - Haikajy Mag
Accueil / Editorial / Ny tombotsoan’ny « numérisation »
Ny tombotsoan’ny « numérisation »
Editorial 19/09/2016 rija 0
Tamin’ny taloha ary mbola mitohy ankehitriny : mameno efitrano maro ny taratasy, ankehitriny « disque dur » dia mahatahiry ireo rehetra ireo. Ny trano mety ho may na hianjera, ny disque dur koa mety ho simba kanefa amin’ny fitahirizana amin’ny haikajy (informatique) dia azo apetraka ny fomba fanavotana (système de sauvegarde).
Taratasy re izany! Taratasy! Mampiasà haikajy
Ny « RECHERCHER » na fitadiavana : isan’ny tena tombotson’ny fametrahana haikajy amin’ny sehatr’asa dia ny fahamoran’ny fitadiavan-javatra.
Ny tombotsoan’ny « RECHERCHER »: amin’ny haikajy ihany irery
Rehefa hanao dika mitovy (duplicata) kara-panondro ianao satria very na simba na lany daty ka mila havaozina dia ianao ihany no asain-dry zareo mitady ny karatra reny (fiche mère) anatin’ireo karatra aman’aliny anaty efitra iray. Mahamenatra izany fomba fiasa izany. Tena loza raha misy ratsy saina ilay olon-tsotra asaina mitady raha ohatra ka akorontany ireo karatra na koa misy entiny mody mihitsy dia ariany. Fantatry ny tomponandraikitra ambony ve izany fomba fiasa izany ??
Manaraka, mampihena ny filaharana (file d’attente) ny haikajy.
Filaharana re izany rehefa tsy misy « informatisation »
Mbola afaka mandeha lavitra ary ny « numérisation » ka ny fampiasana vola taratasy mihitsy no mihafoana tsikelikely : tsy misy intsony ireo GAB (Guichet Automatique de Banque) ireny !
Tsy hisy vola taratasy intsony?
Hot news informatisation malagasy numérisation virtualisation